Dhamaan waxyaabaha ku saabsan Midabka Midabka leh, Midab Swatch, Midabka rinjiyeynta, Midabka timaha, iyo Midabka qurxinta – Online Image Color Picker
Dhamaan waxyaabaha ku saabsan Midabka Midabka leh, Midab Swatch, Midabka rinjiyeynta, Midabka timaha, iyo Midabka qurxinta
Markay noqoto midab, waxa ugu horeeya ee maskaxdaada ku soo dhaca wuxuu noqon karaa liiska midabada aad taqaanid. Waxay noqon karaan casaan, buluug, cagaar, madow, cadaan, bunni buluug, cawlan, casaan, guduud, iyo iwm. Hadda, waxaad u baahan tahay inaad ogaato inay jiraan wax ka badan 16.8 milyan oo midabo.
Waad aragtaa, midabada looma kala sooci karo nolosha aadanaha. Maaha in la xuso, waa inaad taqaanaa palette midabka. Ama waxaa laga yaabaa, waa inaad sidoo kale ku dabaashaa midabaynta rinjiga ama rinjiga rinjiga farshaxankaaga. Iyo sidoo kale, iskama ilaalin kartid inaad isticmaasho midab timo cusub ama xitaa qurxiyo midab ahaan muuqaal qurxin leh. Waxaad aragtaa, midabku waa astaamaha aragtida aragtida aadanaha ee lagu sharraxay qaybaha midabka.
Waa maxay Palette Midabka?
Waxyaabaha ugu horeeya marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in palette midabka uu yahay magac kale oo qorshaha midabka. Waxaad ku aragtaa, aragtida midabaynta, nidaamka midabku waa doorashada midabbada lagu dabaqay qaabeynta warbaahinta badan. Maaha in la xuso, adeegsiga ugromatic ee asalka cad ee leh qoraalka madow. Waxay tusaale u tahay qorshaha midabka aasaaska ah iyo midka caadiga ah ee naqshadeynta websaydhka. Waxbadan oo la dhihi karo, qorshayaasha midabka waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro qaab iyo rafcaan.
Aasaaska Fikradda Midabka iyo Eraybixinta Midabka
Midabkee ayay wax u egyihiin, sida buluug ama casaan
Sidee midab saafi ah u yahay; la’aanta cad, madow ama cawlan ayaa lagu daray
Awoodda ama daciifnimada midabka
Sidee midab khafiif ah ama mugdi ah u yahay
Waxaa lagu abuuray ku darista cawlan khafiif saafi ah
Waxaa lagu abuuray ku darista madow madow khafiif ah
Waxaa lagu abuuray ku darista cadaan cad
Maxay yihiin waraaqaha midabaynta kaladuwan?
Macluumaadka, waxaa jira afar nooc oo waraaqo midab leh. Waa kuwan halkan!
Haa, waxay ku tusaysaa hadhyo iyo qoto-dheer oo hal aragti ah. Waad aragtaa, waxay noqon kartaa qorshayaasha midabka ugu fudud ee la abuuro. Sababta ayaa ah in dhammaantood laga soo qaatay isla midab. Dabcan, way adkaan kartaa laakiin ma ahan wax aan macquul aheyn in la abuuro jab ama qorshe fool xun. Weli, waa inaad taxaddar muujisaa. Taasi waa! Waraaqaha Monochromatic waxay noqon karaan caajis mar marka si xun loo sameeyo.
Tan ku xigta, waxay ku tusaysaa midab weyn iyo midabada labada dhinacba ku yaal giraangiraha midabka. Inbadan oo la ogaanayo, waraaqaha ayaa sida caadiga ah qabanaya shaqo aad u wanaagsan oo muujinaya joogteynta. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale ka shaqaysaa isku mid ahaansho gudaha naqshadeynta. Xaqiiqdii, way fududahay in lala shaqeeyo maadaama aysan jirin kala duwanaansho weyn oo xaga hue ah. Taabadalkeed, waxaad ku arki kartaa isbarbardhigga inta badan waxaa lagu dhuftaa kala duwanaanta hooska midabka. Iyo, waxay xaddideysaa wixii carqaladeeya oo ka fog waxa ku jira.
Midda xigta, waa mid is dhammaystir ah ama midabyo iska soo horjeeda oo ka socda giraanta midabka. Waxay u egtahay casaan iyo cagaar, buluug iyo oranji, iyo wixii la mid ah. Dabcan, waraaqaha isugeynta waxay u fiican yihiin dareen isku dheelitir. Maaha in la xuso, waad hubin kartaa waraaqaha isku midka ah. Halkaan, waxaad ku dari kartaa qodobo kala duwan iyo sidoo kale hadhyo ballaarin kara qorshayaasha. Midkani wuxuu kaa caawin doonaa ka fogaanshaha is barbardhiga iftiinka. Marka, waad iska ilaalin kartaa inaad sameysatid isha isha mar laba midab oo iska soo horjeedda la dhex dhigo midba midka kale.
Midda ugu dambaysa, waxay ku tusaysaa saddex midab oo ka yimid dhibco dhibco isle’eg oo ku yaal giraanta midabka. Waxay u egyihiin casaan, jaalle, iyo buluug sidoo kale. Waad arki kartaa in habka ‘triadic’ uu abuuro palette kala jaad jaad ah oo kaladuwan. Sababtaas awgeed, waxay qaadataa waxoogaa yar oo qorshayn iyo tijaabin ah. Shaki kuma jiro, inay sidaas tahay maadaama ay ku lug leedahay tiro badan oo fikradeed ah oo midba midka kale ka soo horjeedo.
Ma Taqaanaa Waxa Ay Tahay Midabtu?
Buluug: kalsooni, deganaansho, sirdoon
Orange: farxad, xamaasad, hal abuur
Madoow: xarrago, awood, qarsoodinimo
Casaan: tamar, awood, kalgacal
Caddaan: daahirnimo, nadiifin, kaamil
Jaale / Caato: caqli, farxad, tamar
Cagaaran: koritaanka, ubaxnimo, hamiga, amniga
Purple: hamiga, raaxada, hal-abuurka
Sideen ku heli karaa shaashaddayda midabaynta?
Waa inaad go’aamisaa waxqabadkaaga. Si loo go’aamiyo xilligaaga midabka, marka hore waxaad u baahan tahay inaad go’aamiso haddii astaamahaagu ay leeyihiin qaabab diirimaad ama qabow.
Samee isbarbardhiga sare ama isbarbardhiga hoose
Go’aaminta xilligaaga midabka
Eeg palette midabkaaga!
Waa maxay Midab Swatch?
Hagaag, swatch waa muunad shey ama midab leh. Tusaale swatch waa go ‘yar oo dhar ah.
Waa maxay Midabka ranjiyeynta ee aan rinjiyeeyaa qolka fadhiga?
Waad ogtahay, inay jiraan 5 midab oo sare oo aad dalban karto qolkaaga jiifka. Waa kuwan halkan!
Haa, cagaar waa midabka wada noolaanshaha iyo cusboonaysiinta.
Shaki iigama jiro, darbiyada cawlan ayaa ka dhigaya qolkaaga jiifku inuu dareemo inuu sii ballaadhan yahay.
Dabcan, buluug waa midabka Mareykanka ugu jecel yahay, sidaa daraadeed waa qof maskax-furan qolka oo qof walba isugu keenaya.
Iyo, beige waa go-to dhexdhexaad u ah naqshadeeyayaasha gudaha.
Midkan, midab madow wuxuu awoodaa inuu muujiyo karaamada qolkaaga.
Hadda, Ka waran sida loo dabaqo Midabka Timaha Aadanaha?
Halkan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in midabka timaha ay yihiin midabaynta timaha timaha ee ku saleysan laba nooc melanin. Midka hore waa eumelanin kan labaadna waa pheomelanin. Guud ahaan, haddii eumelanin badan la joogo, waxaad heli doontaa midabka timaha midabkiisu mugdi yahay. Iyo, haddii eumelanin ka yar jiro, waxaad heli doontaa h
Grey And Orange Samples And Collections For …